GEEDKA RAGEES EE GUGA HORE: SIDA LOO ABUURO MIRAHA QUDAARTA EE DHULKA U FURAN, GOORTA LA QABANAYO IYO NOOCA AY TAHAY IN LA DOORTO? - BEER CAGAARAN
Sida loo aaso radishes guga hore? Waa kuwee noocyada doorashada?
Guga hore, bannaanka u horey u dadaalayaan in ay helaan dhalidda ugu horeysay ee khudradda vitamin. Tusaalaha muuqda ee Bisaylkiisa hore waa dabocase.
Seddex wiig ah shaqo adag ayaa ku filan si loo soo ururiyo dalagyo tayo sare leh, laakiin waa inaadan ilaawin agrotechnology awood leh ee beerashada.
Dheeraad ah ee maqaalka ah waxaan ku siin doonaa sawirro muuqaal ah oo kala duwan oo kala duwan ee dabocase iyo kuu sheegi sida loo daryeelo dalagga this.
Waa maxay macnaha hore u beerista?
Beerta xilliga hore waxay ku beeri doontaa dalagyada khudradda leh bilowga sariiraha, iyagoo tixgelinaya kobaca wanaagsan ee dabocodka xaaladaha saacadaha gaaban, dulqaad qabow ee dalagyada, hore u bislaaday noocyada, iyo isticmaalka alaabta daboolka haddii loo baahdo.
Waqtigee waa in la beeraa dabocase?
Xilliga ugu wanaagsan ee dabocase ee dhul furan waa dhammaadka March ama bilowga Abriil. Dhirta degdeg ah (illaa -5 digrii) dabocad ma cabsanayaan. Wixii taariikhaha soo-saarka wanaagsan, heer-kulka cimilada hawada waxaa lagu xisaabtamayaa:
Caleemaha roodhiga waxay u muuqdaan maalinta 4aad leh heerkul caadi ah heerkoodu yahay +18 ilaa +23 digrii.
Mudo 7 cisho ah, abuurku wuxuu ku kici doonaa heerkulka celceliska laga bilaabo +10 ilaa qiyaastii +17 digrii.
Waqtiga ugu dheer waa in la sugo caleemaha heerkulka ilaa +10 digrii.
Heerkulka heerkulka wanaagsan ee soo degitaanka waa +20 digrii.
Sidee loo abuuraa abuur khudradeed oo dhulka ku furan bisha Maarso?
Sidee loo doortaa darajada iyo sababta?
Wixii beerto guga isticmaali radishes hore u bislaaday. Khudaarta ayaa u bislaadaan saddex toddobaad. Noocyada caanka ah ee beerto hore waxaa ka mid ah:
Dalagga dalagyada caleemaha dhadhan fiican leh ayaa horayba loo siiyaa 23 maalmood. Khudaarta guduudan-raspberry, caarada ayaa lagu rinjiyey cad. Dhadhanka ayaa ah mid daciif ah.
Dhexdhexaadin kala duwan 18 ilaa 20 maalmood. Radish wuxuu ku wareegaa wareegsan, casaan-raspberry, oo leh qandho, casiir leh, saxarka dabacsan.
Khudaarta isku dhafan, daaqa maalinta 20aad ka dib beerashada. Midabku waa casaan, dhadhanka ayaa yar yar.
Daboolka dabocase leh qaab-qaab-dhafan, midab casaan iyo dabo cad. Saxarka cad wuxuu leeyahay qaab dhismeedka cufan, oo dhadhankiisu si tartiib ah ayuu u fiiqan yahay.
Hore Holland. Roodhiga cas cas ee 20-25 maalmood ka dib beeridda. Faa'iidada ugu weyn ee kala duwan ee ay tahay maqnaanshaha strelkovaniya xitaa leh maalin dheer qoraxdu. Waxaa lagu gartaa dhalidda sare, gaadiidka, iska caabinta cudurada.
Faa'iidooyinka noocyada hore u bislaaday ee dabocase - iska caabbinta fangaska, fayrasyada, waxyeellada gooryaanka.
Xaggee iyo intee in le'eg laga iibsan karaa muusikada Moscow iyo St. Petersburg?
Waxaa lagu talinayaa in ay ka iibsadaan abuurka dabocase hore u bislaadaan baakado khaas ah iyo kaliya ka soo iibiyayaal aamin ah. Magaalada Moscow, waxyaalla badan oo beerto ah oo loogu talagalay dalagyada xididka ah ee beerashada bisha Maarso waxaa la bixiyaa tusaale ahaan, dukaamada:
Dukaamada internetka "Baardheellaha Boqortooyada". Waxaa jira noocyo badan oo Ingiriis ah oo ah "18 maalmood" qiimo ahaan 39 RUB. halkii baako. Noocyo la heli karo: "Heat", "Carmen", "Quraacda Faransiiska" 10 rubi. halkii baako.
"Sariirta dalagga" (St. General Belov, 51, dhismaha 1A). Sii dalagyada beeraha ee "Sedek" (celcelis ahaan 17 rodol).
"Cawska Moscow" (st. Leo Tolstoy, 5, p. 1). Tusaale ahaan, noocyada kala duwan ee la soo jeediyey ee dabocase "18 maalmood", xirmo miisaankeedu yahay 3 g qiimaha 16 RUB.
In St. Petersburg, sidoo kale, shabakad ganacsi waaweyn. Waxaa jira bandhigyo laga helo dukaamadaas:
Dukaamada internetka "Baardheellaha Boqortooyada". Waxaad ka iibsan kartaa miraha "quraacda Faransiiska" (Gavrish) qiimaha 104 rubaar. ilaa 50 g
"Janno iyo Seeds" (waddada Podolskaya, 26). Noocyo kala duwan: "Heat", "Goor hore", "Red Red" (2 g - 20 rubir). Waxaad ka iibsan kartaa roodhiga "Quraacda Faransiiska" (5 g - 25 rubir.). Sida ku xusan amar bixinta heerka "18 maalmood".
Dukaanka internetka "Agroholding" waxay bixisaa noocyo kala duwan oo noocyo hore ah. Tusaale ahaan, daboolka "Carmen" (baakad culeyskiisu yahay 3 g oo ah 16 kharash).
Celcelis ahaan, iibsiyada waaweyn ee dukaamada - laga bilaabo 30 baakidh oo miro ah. Bixinta 200 oo RUB. gobolka.
Waxyaabinta Beerta ayaa lagu qooyay xal salineedka ah (50 g oo ah walxo 1 litir oo biyo ah), miraha dufan ayaa la diida.
Qoyaanka haray ee qoyaanka ah waxaa lagu nadiifiyaa kareemka dhalada (1% xal) ilaa 14 daqiiqadood, ka dibna maydhin biyo, qalajiyey. Waxaad ku qoyi kartaa abuurka korriinka korriinka "Zircon", "Appin".
Ka hor inta aan la beeriin dhamaadka bisha Maarso, waxaa lagu talinayaa in lagu daro macdanta. Ku dhajiyay maro qoyan, miraha waxaa laga tagay maalin maalin ah meel diiran, ka dibna bedelay 4 saacadood qaboojiyaha, laga saaray, mar kale ku riday kuleylka. Samee sida nooc kale oo heerkul ah illaa ay ka dhalato gogol.
Sidee loo beeraa?
Ka hor inta beero waxay lagama maarmaan tahay in jardiinooyinka lagu sameeyo sariiraha, kuwaas oo si wanaagsan loo qoyay. Carrabku waa inuu dabacsan yahay.
Masaafada u dhaxaysa safarka waxaa lagu talinayaa inay sameeyaan 18-20 cm, inta u dhaxaysa dhirta - 2 cm.
Seeds waxaa lagu aasay carrada 2-2.5 cm Haddii qaabdhismeedka carrada waa mid aad u iftiimaya, markaa waxaa lagu beeray ilaa 3 cm.
Dabocase beerta si gooni ah u jiifsan, si tartiib ah ku rushaysaa. Beeridda calaamad gaar ah waxay tirtiri doontaa baahida loo qabo dhirta khafiifinta dheeraadka ah.
Sariiraha waa la waraabiyaa, daboolay filim, ilaa caleemaha kowaad soo baxaan. Markaa kadib ayaa hoyga laga saaraa.
Waxaan soo bandhignaa si aan u daawano fiidiyowga ku saabsan sida loo abuuro radishes horaanta guga:
Daryeelka warshad dhalinyaro ah
Toddobaadkii kaddib marka uu jeermisku bilaabmayo.taas oo soo noqnoqonaysa xilliyo kala duwan. Samee rusheeyaha si joogto ah (ama waraabinta) geedo. Biyaha loo isticmaalo waraabinta diirran. In xilli qalalan waraabiyo dalagyada maalin kasta.
Nidaamka waxaa lagu sameeyaa sutra ama fiidkii. Dharka sarreeya waxay sameeyaan walxaha dabiiciga ah iyo macdanta. Digada waxaa laga soo qaadaa keliya hawada cusub - dhirta ayaa tagi doonta fallaaraha. Ka dib bacriminta, beerto waxay yihiin mulched leh peat si ay ciidda waa hawo badan.
Dhibaatooyinka beerashada ee khudaarta hore waxay dhici kartaa marka goobta qaldan ee beerto. Wixii dalagyada dabocase, waxay qodayaan meesha ilaa dayrta.. Haddii aan la sameynin, ciidku wuxuu noqon doonaa mid aad u culus, tani waxay abuuri doontaa biqilka abuurka oo sii adag.
Ma dooran kartid sariiro beerto ah, halkaasoo dalagyada daaqa la jaray, radishes ayaa laga qaadi karaa cudurrada:
xakamaynta budada ah (hortago daaweynta fungicides);
Kiloo (halgan - saarista dalagyada ay saameeyeen, hirgelinta lime, jebinta beeritaanka meeshan muddo 4 sano ah);
bakteeriyada (oo laga reebo buufinta Bordeaux isku dar ah).
Dhibaatada ku dhejisashada beerto waxay caadi ahaan dhacdaa marka masaafada khaldan ee la xushay (ka yar 2 cm) markaad abuuraysid abuur. Sababta toogashada ayaa si aan sax ahayn loo doortay taariikhda dhulalka marka saacadaha iftiinka iyo heerkulka hawada.
Waa muhiim! Dhicis la'aanta qoyaan - sababta sababa ugxansidaha, qoryaha, qallafsan, qadhaadh, dabocase adag. Qoyaanka waxaa lagu hayn karaa sariiraha, beerashada mulch. Cunto badan oo waraabinta waxay keeni kartaa cayayaanka khudaarta.
March beerashada - ballanqaad ah helitaanka dabocase hore ee sariiro beerta. Waxaa muhiim ah in la doorto noocyada kala duwan ee Bisaylkiisa, goob wanaagsan oo la daweeyey illaa dayrta, si loo abaabulo dayactir farsamo oo sax ah iyo dayactirka seedling. Si habboon u adeegsanaya farsamooyinka beeraha, waxay koraan soodhada casiir leh, qallalan, khudaarta cagaaran.